Ny tanànan’i Siberie mikasa ny hifidy saka ho ben’ny tanàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Desambra 2019 19:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, русский, Español, Ελληνικά, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2015)
Fanambatambarana sary an'i Kevin Rothrock.
Barnaoul, dia tanàna tranainy iray ao Siberia andrefana, miorina any amin'ny 2.900 kilaometatra atsinanan'i Maosko, ahitana mponina manodidina ny 700.000. Efa ho dimy taona izao ireto farany no tsy nifidy ny ho ben'ny tanànany. Arakaraky ny tsy analaviran'ny politika monisipaly azy ireo, nanomboka nanome marika tsy fahafaliana amin'izay ireo olom-pirenena tsotra. Izany no nanohanan'ny vondrom-piarahamonina iray ety anaty aterineto ny firotsahan'ny saka iray ho eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna.
Nandritra ny ampahany betsaka tamin'ireo dimy taona lasa, Igor Savintsev no anaran'ny “tale monisipaly” tao Barnaoul. Nametraka fialàna izy tamin'ny Aogositra, rehefa nanaovan‘ireo mpanao fanadihadiana fitiliana ny fanararaotam-pahefana nataony. (Voampanga ho nanao varoboba an'ireo tany monisipaly tamin'ireo orinasam-pianakaviany i Savintsev, niteraka fahavoazana ho an'ny fitantanany izany, izay vinavinaina ho mitentina 155.000 dolara.) Savintsev no ben'ny tanàna voatendry ho an'i Barnaoul taty aorian'ny vanimptoana Sovietika ary tsy nofidian'ny vahoaka.
Ny zanaka lahin'i Savintsev, Maxim, dia somary tsy azo lazaina ho fakàn-tàhaka ihany koa. Tamin'ny taona lasa, anisany voasoratra tao anaty lisitra iraisam-pirenena misy ireo olona karohana izy rehefa nandositra ny fireneny noho ny fiampangana hosoka sy fanodikodinana vola. Rehefa avy tafaporitsaka tamin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny enina volana, tra-tehaka tany Thaïlande ihany i Maxim nony farany. Migadra ao amin'ny fonja Rosiana izy hatramin'izao, miandry ny fitsaràna azy.
Ifandroritan'ny andiana mpiasam-panjakana sy ireo mpandraharaha eo an-toerana ny sezan'i Igor Savintsev (tazonin'ny tale monisipaly mpisolo toerana vonjimaika). Ny 22 Desambra, hifidy ny ben'ny tanàna vaovao ao Barnaoul ny kaomisiona iray eo ambany fifehezan'ny filankevitra monisipaly,sy Alexander Karline, governora ao Altaï , ben'ny tanàna hisahana ireo andraikiny hatramin'ny taona 2017.
Eo no miditra an-tsehatra ny vondrompiarahamonina an-tserasera Altaï ao amin'ny Vkontakte (tambajotra sosialy malaza indrindra any Rosia). Ny 6 Desambra, herinandro telo taorian'ny fandraiketana ofisialy ireo kandidà rehetra mihazakazaka ho ben'ny tanàna, nanambara ny firotsahany ny Altaï Online, nanasa ireo mpikambana tao aminy mba hisafidy amin'ireo mpifaninana fito samihafa: ireo olona enina tena voarakitra marina ho kandidà, miampy an'i Barsik, ilay saka an'ny mpitantana ny vondrona. Herinandro taty aoriana, nahazo vato efa ho 4.500 (91,2 % tamin'ireo latsabato rehefa voaisa) i Barsik.
“Iza no irianareo ho ben'ny tanàna vaovao eto Barnaoul?” Pikantsary: Vkontakte
Lasa lohateny goavana tamin'ireo media rosiana ny fifidianana virtoaly nandresen'ny Altaï Online, izay ny fifidianana an'i Barsik dia tsy hafa fa solonà fandatsaham-bato “anoherana ny rehetra” fotsiny ihany [araka ny voalazan'ny fehezandalàna mifehy ny fifidianana]. Natokan'ny tranonkala Gazeta.ru ho an'i Barsik ny lahatsoratra misy teny miisa 1.000, miaraka amin'ireo fanehoankevitra feno haravoana avy amin'ireo tomponandraikitra isam-paritra momba ireo antoko politika rosiana “ara-drafitra” (ireo vondrona izay mahazatra ny mahita azy ireo mahazo toerana ao amin'ny parlemanta federaly, ary, farafaharatsiny mitàna anjara asa iray ao anatin'ny fandrafetana làlana eo amin'ny firenena). Ohatra, nanambara tao amin'ny Gazeta.ru ny tomponandraikitra iray avy amin'ny Just Rosia fa “tsy eo amin'ireo kandidà no olana. Fanoherana ny rafitra eto amintsika io, amin'ny fanendrena amin'ireo toerana ho an'ny mpitantana. Tsy mba naneho fialantsiny tamin'ireo olona tantaniny akory ny filankevitra monisipaly ankehitriny momba ny tsy fahaiza-mitantan”ilay tale monisipaly farany”. MAndritra izany fotoana izany, ny solontenan'ny Antoko Kaominista, izay tsy nanolotra kandida ho an'i Barnaoul, nilaza fa ” ireo latsabato ho an'ilay saka dia fanehoan'ny mponina ny fhavononany haneho ny tsy hafaliany”.
Sary namboarina) “Iza? Saka” (Amin'ny teny rosiàna, mitovitovy ireo teny roa) Pikantsary: Vkontakte.
Fa ho an'ny governora an'i Altaï, Alexander Karline, maika izy ny hiarahaba amin'ny fomba hafahafa ny fahatongavan'ny biby famantarana an'i Barnaoul tamin'ny fanambaràna tamin'ireo mpanao gazety fa “amin'ny alalan'ilay sary mahafinaritr'i Barsik, maneho ny firariantsoany ho an'izay vaovao hitarika ny tanànany ireo mponina eto aminay. Eto aminay, ampifandraisina amin'ny fiadanana sy ny fampaherezana ity biby be herim-po ity.”
Manana anaram-bositra hoe “Altaïskii Seyatel” (Tambanivohitr'i Altaï) ny mpitantana ny vondrom-piarahamonina Altaï Online”. Nangatahan'ny RuNet Echo izay eritreriny momba io fijoroan'ny rosiana ho an'ny sakany io, sy ny hafanampon'ireo antoko mpanohitra amin'ny fanafihan'i Barsik ny rotoroto. “Ny fahombiazan'i Barsik ilay Saka dia azony tamin'ny hoe na iray aza ireo olona eto amin'ity tanàna ity tsy misy mahafantatra mihitsy an'ireo kandidà hafa”, hoy ny fanazavan'i Tambanivohitr'i Altaï. “Tsy fantatra ny fandaharanasan'izy ireo, ny antony nirotsahan'izy ireo, ny tetikasan'izy ireo ho an'ny tanàna. Mampanontany tena ny antony ifalian'ny mpanohitra tahaka izany, nefa izy aza tsy afaka nandroso kandidà fantatry ny rehetra sy takatr'ireo mpifidy”.
Manelingelina an'ireo olona izay maniry ny hahazo ny toeran'ny ben'ny tanànan'i Barnaoul ankehitriny, ny filahatsahan'i Barsik dia toa tsy nitsiry teo ambony tanin-jezika mitovy amin'ny hetsika fanoherana izay fantatry ny ankabeazan'ireo vahiny araka izay vakiany mikasika ny fihetsiketsehana ao Rosia. Tandreman'i Tambanivohitr'i Altaï ny tsy hitsikera mivantana ny kilasy politika, ary nilaza tamin'ny Gazeta.ru fa lavitra an'i Barsik ny ho mpanohitra. Mbola mampiharihary kokoa ihany, niteny koa izy fa tian'i Barsik ny Mandatehezam-bahoakan'i Rosia manontolo – hetsika iray ara-politika natombok'i Vladimir Poutine tamin'ny taona 2011, tao anatin'ny fikasàny hamorona tahirim-panohanana avy any ivelan'i Rosia Mitambatra, antoko politika mitantana ny firenena.
Nolazain'ny Tambanivohitr'i Altaï tamin'i RuNet Echo ny fanantenany hoe manampy amin'ny fanomezana laza ny tanàna i Barsik, tahaka an'ilay “ben'ny tanànan'ny vahoaka” na hanao azy ho toerana mahasarika ny mpizahatany. “Efa anisany tafiditra anatin'ny politikam-paritra sahady i Barsik”, hoy ny tompony, “ary tsy eritreriny velively ny hiàla amin'ny tanjony ara-politika”.